Atsinanana sy V7V ary Atsimo Atsinanana: “Hanova ny tantara isika”, hoy ny kandidà Rajoelina | NewsMada
Atsinanana sy V7V ary Atsimo Atsinanana: “Hanova ny tantara isika”, hoy ny kandidà Rajoelina
Nihazo ny tany Toamasina sy ny tany Vatovavy Fitovinany (V7V) ary Atsimo Atsinanana indray ny dian’ny kandidà Rajoelina, ny faran’ny herinandro teo. Resy lahatra aminy avokoa ireo vahoaka nihaino azy, hatrany amin’ny kaominina madinika indrindra notsidihiny.
“Hanova ny tantaran’i Madagasikara isika. Mila miray fo anefa isika… Na isika mihemotra na isika handroso. Tsy hanaiky ho faharoa anefa isika ary tsy maintsy mandresy miaraka amin’ny vahoaka. Efa voalohany rahateo isika tamin’ny fihodinana voalohany. Mino aho fa matoky ahy ianareo hanavotra ity firenena ity”, hoy izy tamin’ireo faritra ireo. Nanteriny fa ho filoha hanampy ny tantsaha, ny zokiolona, ny vehivavy sy ireo tsy manana asa ary ny tanora ny tenany. Nampitandrina koa anefa ny kandidà laharana faha-13 fa efa mihevitra ny hangala-bato ny sasany satria efa resy izy. “Aza miala amin’ny birao fandatsaham-bato raha tsy vita ny fanisam-bato satria misy ny mitady hividy ny delege hanao vato maty ny vatontsika”, hoy izy. Nohitsiny fa tsy matahotra ny fihodinana faharoa ny tenany ary tsy mitsoaka ady. “Hatao 70 % ny vato azon’ny kandidà faha-13 satria mifamatotra ny fitiavantsika. Tonga eo amin’ny kihon-dalana ny firenena ankehitriny. Mila tanora manana vina, mavitrika mahavita azy ity tanindrazana ity”, hoy ihany izy.
Resaka “Miami” ao Toamasina
Nitondrany fanazavana koa ilay resabe momba an’i Toamasina ka nilazany fa be fialonana ny sasany satria tsy mba manana izany eritreritra izany. “Hataontsika tahaka ny any Miami manomboka eo amin’ny Bord hatrany amin’ny Résidence présidentielle. Aleo hataon’i “Zandrikely” ny zavatra tsy vitanao ry Dadabe, ry Zokibe. Rehefa ho vita toy ny any Miami ity Bord eto Toamasina ity, izy ireo manenjika antsika ireny no haka sary eny. Hilalao eny ny zanak’izy ireo”, hoy ny mpanorina ny IEM.
Ankoatra izany, nampanantena ny hanampy ny mpamboly jirofo amin’ireo faritra ireo ny kandidà Rajoelina. Eo koa ny fametrahana fandriampahalemana ka anisan’izany ny hividianana angidimby miisa 10. Ny hanaovana manara-penitra ny EPP sy CEG ary ny lycée miaraka amin’ny hopitaly.
Velirano hanavotana ny vahoaka sy ny firenena
Hapetraka isaky ny faritra koa ny fitaovana lehibe hanamboatra lalana. Hatsangana ao Toamasina ny “Building mora” ho an’ny mpiasam-panjakana. Hamboarina ny tohodrano rehetra ary homena fiofanana sy velaran-tany 10 ha avy ny tanora vonona ny hamboly. Eo koa ny fanorenana indostria ahafahan’ny tanora miasa… “Manao velirano aho fa hanavotra ny vahoaka malagasy sy ny firenena”, hoy izy.